Life and beyond - Khet Raj Mainali: एकैछिन हास्ने हो कि ?
एकैछिन हास्ने हो कि ?
घरिघरी बिवाहको प्रमाण पत्र (Marrige Certificate) पल्टाइ घोरिएर हेरी रहेको पती लाई पत्निले सोध्छे ।
पत्नि- होईन, निक्कै बेर देखी हाम्रो विवाहको प्रमाण पत्र हेर्दै हुनुहुन्छ , के छ र त्यस्तो खास ?
पति- होईन , त्यस्तो केहि होईन मैले त खाली यो प्रमाण पत्र को जारी मिती (Date of Issue) र बैध रहने मिती (Expire Date) मात्र हेरेको, कि यस्को म्याद कहिले समाप्त हुँदैछ भनेर............
Posted by cheeju at 4:23 PM